45 Siyaabaha Ugu Dhaqsaha Badan Oo Loogu Sameyn Karo Lacag Khadka Tooska Ah 2022
Bogga ugu weyn 45 Siyaabaha Ugu Dhaqsaha Badan Oo Loogu Sameyn Karo Lacag Khadka Tooska Ah 2022
Hi, waxaan ahay tifaftiraha ugu sarreeya ee degelkan lacag samaynta ugu horreeya, TheCealthCircle maantana waxaan ka wada hadli doonnaa 45 dariiqood ee ugu dhaqsaha badan oo aad lacag caddaan ah oo fudud uga samayn kartid gurigaaga.
Aniga oo ahaa ganacsade iyo tababare internetka ah sannado hadda, waxaan si weyn uga faa'iidaystay fursadaha badan ee ku jira internetka.
Haddaba maalin maalmaha ka mid ah, ayaan is idhi - maxaad dadka ula wadaagi weyday fikradahaas? Maxaad dadka hodan uga dhigi weyday?
Websaydhkan iyo fikradaha lacag-abuurka badan ee ku jira ayaa ka dhashay fikirkaas keliya. Maantana waxaan is -hoosaysiinayaa inaan dhoolla -caddaynta wejigayga akhristayaasha iyo lacagta ku shubo xisaabaadkooda bangiga.
Halkan waxaa ah shax ah waxa la fili karo:
Xor baad u tahay inaad aragto qoraaladayda 35 Sure Waddada loo sameeyo 200 Doolar Maalin kasta
Hadda, aan toos u aadno qodobbada ku saabsan siyaabaha ugu dhaqsaha badan ee lacag looga sameeyo internetka.
Fadlan ogow in hababka aan kuula wadaagayo ay yihiin 100% hab sharci ah oo lagu sameeyo internetka maadaama mareegaha uusan waxba ku lahayn khiyaanada ama khiyaanada.
Waan dalbaday oo ka faa'iidaystay hababka qaarkood waxaanan rajaynayaa inaad adigu ka faa'iidaysan doonto mid ka mid ah/ama isku darka hababka.
Waa kuwan 45 -ka ugu dhaqsaha badan uguna wanaagsan ee lacag looga helo internetka guriga:
Samee Website (blog)
Tababbarka onlaynka ah
Abuur YouTube Channel
Buugaagta Maqalka ah
Isku qor www.mturk.com
Noqo Freelancer Online ah
Ku iibi Xirfadahaaga Goobta Niche
Ka Iibso Farshaxankaaga Bulshada6
Wadatashiga khadka tooska ah
Ku Iib Sawirada Saamiyada Online
Kiro kiro Airbnb
Isku qor JustAnswer
Ku iibi Etsy
Noqo Saameeyaha Baraha Bulshada
Noqo Kaaliye Virtual ah
Ku qor Barnaamijka Iskaashiga Dhexdhexaad
Ku Iibso Shopify
U diyaari Canshuurta dadka
Noqo Macallin Ingiriis Virtual ah
Maqaallada iyo Maqaallada Caddaynta
Calaamadeynta Gaarka ah iyo Alaabada Iibinta ee Amazon
Isku qor TaskRabbit
Lacag u Samee Caafimaadkaaga
Iibso oo Iibso Domain
Bilow Ganacsi Online ah
Iibi Qorshayaasha Macalimiinta Cusub
Iibso Khibradaada Ku Saabsan Hufnaanta.fm
Ku shaqee Bogga Fan ee Qof Caan ah
Lataliyaha Shukaansiga Online
Tababaraha Fudud ee Internetka
Abuur Koorsooyin Online ah
Qor Dib u eegista Meelaha xiisaha leh ee aad booqatay
Raadi Macaamiisha Madaxa Bannaan oo Iibi Adeegyadaada
Ka bilow meheradda Dharka ee internetka
Tafatir Fiidiyowyada Internetka
#1 Abuur Website (baloog)
Abuuritaanka degel waa inay noqotaa lambarkayga koowaad ee aan lacag ku kasbado internetka maadaama aan dhowr sano ahaa ka -faa'iideyste.
Marka, ma tahay qoraa wanaagsan? Miyaad leedahay meel ku takhasusay sida caafimaadka, farsamada, waxbarashada, isboortiga, iwm?
Haddii aad saxdo mid ka mid ah su'aalaha kor ku xusan, markaa runtii waa inaad tixgelisaa dhisitaanka degel.
Milkiilayaasha baloogga ama mareegaha waxay lacag ka dhigaan goobahooda iyagoo adeegsanaya laba hab oo waaweyn - barnaamijka Google Adsense iyo suuqgeynta ku xiran. Waxaad internetka ka raadin kartaa sida loo bilaabo blog oo aad ugu biirto liiska sii kordhaya ee milkiilayaasha mareegaha/baloogga.
Sidoo kale, fadlan ogow inaadan u baahnayn inaad naftaada dhisto baloog/degel. Tag goobaha sida www.fiverr.com or www.upwork.com si aad u hesho horumariyeyaasha webka oo bixiya adeegyo dhisme websaydh qiime qiima leh.
#2 Tababarka onlaynka ah
Haddii aanan ka shaqeynaynin degel, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weynaado tababarka internetka. Tababbarka tooska ahi wuxuu la mid yahay baloog -garaynta sababta oo ah labada hab ee samaynta lacag caddaan ah oo fudud oo khadka tooska ah waxay ku lug leeyihiin iibinta fikradahaaga dadka.
Farqiga ugu weyn ee halkan ka jira ayaa ah - Blogging-ka, waxaad ka iibisaa aqoontaada dadka aadan garanayn sababta tababarka khadka tooska ah ay ku lug leedahay iibinta fikradaada dadka aad heshiis kula jirto xagga lacag bixinta.
Si aad u bilowdo tababbarka khadka tooska ah, booqo suuqyada caanka ah ee internetka sida www.fiverr.com ama www.etsy.com si aad u hesho dad diyaar u ah inay lacag ku siiyaan si aad u barato goobtaada takhasuska leh.
#3 Abuur Kanaalka YouTube
Kanaalka YouTube wuxuu xoogaa la mid yahay baloogga waxaana jira lacag badan oo laga sameeyo lahaanshaha kanaalka YouTube. Si aad lacag uga hesho YouTube, waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad samaysato fiidiyowyo aad ku maaweeliso ama ku barato dhagaystayaasha.
In kasta oo, ka hor inta aanad lacag ka samayn YouTube, waa in aad la kulantaa siyaasadaha qaarkood oo ay ku jiraan ku shubista nuxurka asalka ah oo keliya kanaalkaaga waana inaad haysataa ugu yaraan 1,000 macaamiil ah iyo 4,000 saacadood oo muuqaal ah 12 bilood ee la soo dhaafay.
Booqo website-ka www.youtube.com si aad wax badan uga ogaato madal iyo sida loo sameeyo kanaal.
Sidoo kale, akhri qoraalkayaga Mushaharka Billaha ah ee YouTubers oo leh in ka badan Hal Milyan oo Macaamiil ah, kaliya waxaa laga yaabaa in lagugu sasabo ama lagugu dhiirigeliyo inaad abuurto kanaal.
#4 Samee Podcasts
Podcasts waa hab kale oo weyn oo lacag looga sameeyo internetka.
Ma ku fiican tahay sheekooyinka dhiirrigelinta leh?
Dadku waxay si joogto ah u raadinayaan rajooyin ay ku dhegganaadaan. Waxaad samayn kartaa podcast dhiirigelin leh si aad dadka u caawiso marka aad samaynayso xoogaa lacag caddaan ah isku mar. Sidoo kale, waxaad samayn kartaa podcasts qosol leh haddii ay kugu jiraan waxyaabo majaajillo ah.
#5 Imtixaanka Shabakadda
Ma aqoon u leedahay horumarinta webka? Hadday haa tahay, markaa waa inaad ka fekertaa inaad ka samayso xoogaa lacag caddaan ah oo fudud khadka tooska ah dadka u baahan in la baaro degelkooda.
Dadka wax qora ee cusub ayaa inta badan isha ku haya dadka si ay dib ugu eegaan mareegahooda si ay u arkaan sida goobahoodu u wanaagsan yihiin.
Markaa, haddii aad fikrad ka haysato waxa mareegaha wanaagsani noqonayo sida hagidda, naqshadaynta, tayada dhejimaha, iyo wixii la mid ah, waxaad samayn kartaa lacag jilicsan adiga oo ku bixinaya 10 - 20 daqiiqo tijaabinta mareegaha dadka.
Akhri qoraalkan si aad u aragto 11 meelood oo aad lacag ku heli karto si aad u tijaabiso alaabta guriga
#6 Buugaagta Maqalka ah ee Sheeko
Waxaad ka samayn kartaa lacag fiican online ka warshadaha this aan weli la faa'iidaysan. Buugaagta maqalku caan uma aha sidaad rabto inay noqdaan inkasta oo ay fududahay gudbinta macluumaadka.
Marka, haddii aad garatid inaad leedahay cod wanaagsan, waxaad samayn kartaa lacag fiican oo buugta loogu beddelo buugaag maqal ah.
Fadlan naftaada runta u sheeg markaad go'aankan qaadanayso. Waxaad ogaan lahayd marka aad leedahay codad wanaagsan adigoo u maraya amaanta dadka.
#7 Iibi ebooks
Waxaad ku samayn kartaa lacag caddaan ah oo fudud khadka tooska ah adiga oo qoro oo iibiya ebooks. Waxaa jira dad aad u tiro badan oo doonaya inay qoraan buugaag laakiin ku guuldaraysta inay arkaan riyooyinkoodii oo miro dhal ah sababta oo ah khayraadka iyo shuruudaha loo baahan yahay si loo daabaco buug.
Haddii aad ku dhexjirto kooxdaas, waxaa laga yaabaa inaad ka fekerto qorista iyo iibinta buugaagta buugaagta maadaama ay aad uga raqiisan tahay daabacaadda nuqulada adag.
#8 Isku qor www.mturk.com
Miyaad maqashay Mechanical Turk oo ay leedahay Amazon?
Madalkani wuxuu hadda u yahay il -nololeed kumanaan xubnood oo adduunka ah. Waa mid ka mid ah aaladaha aad si fudud lacag uga samayn karto internetka.
Farsamada Turkigu waxay u baahan tahay dadka isticmaala inay fuliyaan dhowr hawlood oo yaryar sida samaynta sahaminta, dib-u-akhrinta, qorista, iwm.
#9 Noqo Freelancer Online ah
Ma leedahay xirfado ama karti la iibin karo? Ma tahay qoraa wanaagsan? Ma taqaan sida loo naqshadeeyo garaafyada? Ka warran horumarinta shabakadda?
Haddii aad tahay sayid mid ka mid ah xirfadahaas, markaa waa inaad lacag ku abuurtaa xirfadahaaga adoo iska diiwaangelinaya mid ka mid ah shabakadaha xorta ah ee caanka ah sida Fiverr, Upwork, iyo Etsy.
#10 Ku iibi Xirfadahaaga Goobta Niche
10 Tanith Habka samaynta lacag caddaan ah oo fudud khadka tooska ah ayaa xoogaa la mid ah 9th habka kor lagu sharaxay laakiin ku kala duwan yahay waxa ku jira.
Goobaha niche waxay muujiyaan xirfado gaar ah oo kaliya si kuwa soo booqda ee soo gala goobta ay u soo booqdaan xirfad gaar ah, oo ka duwan goobaha kale ee xorta ah ee ka kooban xirfado badan.
99designs iyo cloudpeep waa qaar ka mid ah goobaha ugu fiican ee aad iska qori karto.
#11 Naqshadeynta Sawirada
Naqshadeynta garaafku waxay hadda ka mid tahay shaqooyinka caanka ah ee aad lacag badan ka samayn karto intarneedka iyo adduunka jir ahaaneedba.
Waxaad ku bilaabi kartaa adiga oo raadinaya shirkado maxalli ah oo ku xeeran xaafaddaada si aad ugu samayso naqshadeyn garaaf.
#12 Ka Iib Gacantaada Bulshada
Ma waxaad tahay fanaan? Ma leedahay farshaxan iyo farsamooyin aad adigu abuurtay? Waa maxay sababta aanad ula qabsan karin hibadaada adigoo iibinaya farshaxankaaga iyo naqshadahaaga www.society6.com?
Waxaa hubaal ah in aad lacag ka samaynayso khadka haddii si wanaagsan loo sameeyo.
Akhri qoraalkayaga 30 Suuqyada ugu Wanaagsan Online si loo iibiyo Farshaxanka iyo Alaabada Farshaxanka
#13 Wadatashiga onlaynka ah
La -talinta meheradda maxalliga ah ee internetka waxay noqon kartaa hab sahlan oo lacag caddaan ah looga sameeyo internetka. Haddii aad hubto inaad ku dhex abuurtay xirfad qiimo leh warshadaha dhexdeeda ama aad shahaado ka heshay meel kasta oo la iibin karo oo ku takhasusay, waxaad iska qori kartaa mid ka mid ah suuqyada internetka ee caanka ah sida Etsy si aad ula tashato meheradaha maxalliga ah.
#14 Ku Iibi Sawirrada Hantida onlayn
Haddii sawir qaadistu ay tahay shaygaaga, markaa waxaad lacag ka samayn kartaa hiwaayaddaada adiga oo iska diiwaangelinaya mareegaha saamiyada caanka ah sida www.shutterStock.com or www.istockphoto.com.
Dadku waxay sameeyaan royalties iyagoo soo gudbiya sawirro qurux badan oo ku yaal goobahan. Waxa kale oo aad samayn kartaa lacag badan adiga oo abuuraya mareegahaaga sawir qaadista si aad u geliso internetka oo aad u iibiso sawirro qurux badan oo meelo ama dhacdooyin naadir ah.
#15 Ku kirayso Qol AirBnB
Ma taqaan Airbnb?
Haddii aad waqti badan ku qaadato internetka markaa waxaad u badan tahay inaad la kulantay boostada la kafaala qaaday ee Airbnb.
Airbnb waa degel kuu oggolaanaya inaad kireysato qol bannaan oo gurigaaga ah ama hanti dhan oo bannaan dadka (gaar ahaan socotada) kuwaas oo raadinaya meelo ay si ku -meel -gaar ah u joogaan oo doorbida inaysan hoteellada degin.
Dad badan ma jecla inay hoteelada iska joogaan buuqa iyo nooca dadka aad ka helaysid hoteelada. Dadka qaarkood waxay doorbidaan inay ku noolaadaan jawi deggan oo deggan.
Waxaan idinka codsanayaa inaad ka faa'ideysataan madalkan si aad lacag caddaan ah oo fudud uga samaysaan khadka tooska ah haddii aad qol bannaan ku leedahay aqalkaaga.
Sidoo kale, uma baahnid inaad ka baqdo waxyeelada maadaama shirkadu ay si buuxda u caymissan tahay iyo wixii dhaawac ah (taas oo dhif ah la soo sheego) waxaa lagu daryeeli doonaa caymis.
#16 Ku Saxiix JustAnswer
Just Jawaab waa madal lacag lagu siiyo si aad uga jawaabto su'aal xirfadeed.
Miyaad tahay xirfadle la aqoonsan yahay sida Dhakhtar, Qareen, dhakhtar, iwm?
Haddii aad mid tahay, waxaad samayn kartaa lacag dheeraad ah adiga oo ka jawaabaya su'aalaha xirfadeed ee dadku maalin walba weydiiyaan.
Si kastaba ha noqotee, si aad ugu biirto goobta, waxaa lagaa rabi doonaa inaad soo gudbiso dukumentiyadaada oo aad dib u bilowdo si loo hubiyo inaad tahay xirfadle.
#17 Ku iibso Etsy
Etsy hadda waa mid ka mid ah suuqyada ugu sarreeya internetka adduunka. Waxaad ku samayn kartaa lacag caddaan ah oo fudud khadka tooska ah adoo iibinaya alaabtaada sida farshaxanka, farshaxanka, xirfadaha, wax kasta oo la iibin karo. Waxaa jira malaayiin qof oo si joogto ah u booqda goobta si ay u raadiyaan alaab ay u hanqal taagayaan inay haystaan.
Booqo goobta si aad wax u iibiso.
#18 Noqo Mid Saameeya Baraha Bulshada
Ku noqoshada saamayn mid kasta oo ka mid ah aaladaha dhexdhexaadinta bulshada sida Instagram, Facebook, Twitter, ama Snapchat waa hab aad ku tagto haddii aad doonayso inaad lacag caddaan ah oo fudud ku samayso internetka.
Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u noqotid saamayn ku yeelanaya khadka tooska ah waa inaad abuurto bog oo aad ka shaqeyso sidii aad u heli lahayd kuwa soo socda.
Haddii aad qosol badan tahay, ku dheji qoraallo ama fiidiyowyo qosol leh boggaaga oo la wadaag dadka si ay u jeclaadaan boggaaga. Sidoo kale, waxaad xayeysiin kartaa boggaaga adoo socodsiinaya xayeysiis si dadku u arkaan oo u jeclaadaan boggaaga.
Ka dib markaad dhammaystirto tillaabooyinkan, goor dhow ama goor dambe summaddu waxay bilaabi doontaa inay kuugu soo dhowaato si aad uga caawiso inay kor u qaadaan badeecadooda.
#19 Noqo Kaaliye Virtual ah
Haddii aad hibo u leedahay habsamida markaa waxaad ka samayn kartaa lacag wanaagsan adiga oo codsanaya inaad noqoto kaaliyaha dalwaddii ee dadka ku nool meel kaa fog.
Caawiyaha dalwaddu wuxuu samayn doonaa wax kasta oo ka mid ah diiwaangelinta ilaa cilmi -baarista, gelitaanka keydka xogta, safarka ballanta, iyo maareynta emaylka. Kani waa hab wanaagsan oo lacag looga sameeyo internetka.
#20 Ku qor Barnaamijka Iskaashiga Dhexdhexaad
www.medium.com waa goob caan ah oo internetka ah oo aad ku soo dhejiso maqaallo ku saabsan maaddooyin kala duwan si aad u gaarto malaayiin qof oo booqda bil kasta ah mareegaha. Websaydhku waa madal u fiican balooglayaasha iyo milkiilayaasha mareegaha ee raadinaya inay koraan taraafikada.
Dadku hadda waxay lacag ka helaan mareegaha iyagoo adeegsanaya barnaamijyada lammaanehooda. Booqo goobta si aad wax badan uga ogaato barnaamijka.
#21 Suuqgeynta Emailka
Waxaad u badan tahay inaad farriimo badan ku hesho mareegaha xitaa haddii aadan waligaa iska qorin farriimaha.
Taasi waa suuqgeynta emaylka.
Waa ficilka dirista farriin ganacsi, sida caadiga ah koox dad ah, iyadoo la adeegsanayo email.
Waxaad ku samayn kartaa lacag aad u wanaagsan suuq -geynta iimaylka oo leh warsidaha niche, ka raadi internetka si aad wax badan uga ogaato habkan.
#22 Ku Iibso Shopify
Haddii aad qorsheyneyso inaad ku weyneyso iibinta alaabada khadka tooska ah, markaa Shopify waa mid ka mid ah xulashooyinka la heli karo. Madalku wuxuu ku siinayaa dhammaan qalabka lagama maarmaanka ah ee loo baahan yahay si loo dhiso dukaankaaga internetka ee gaarka ah.
Isdiiwaangeli si aad u heshid domain gaar ah, iyo qaab qurux badan si aad dukaamadaada onlaynka ah u shaqeeyaan.
#23 U diyaari Canshuurta dadka
Waxaa jira dad diyaar u ah inay ku siiyaan lacag si aad u hubiso tirooyinkooda. Meherad kasta iyo shakhsiyaadka badankoodu waxay u baahan yihiin qof ka caawiya diyaarinta cashuur celinta, gaar ahaan waqtiga ama milkiilayaasha meheradaha yar yar ee xaniban.
Ka eeg dadka noocaas ah goobaha sida www.craigslists.org si lacag caddaan ah oo fudud looga sameeyo internetka.
#24 Noqo Macallin Ingiriis oo Farshaxan ah
Miyaad la socotaa inay jiraan meherado aad iska qori karto si aad carruurta u barato sida wax loo akhriyo loona qoro Luqadda Ingiriiska?
Waxaad samayn kartaa ilaa $ 25 saacaddii inaad carruurta barato luqadda Ingiriiska. Inta badan dadka goobta jooga waxay ka yimaadaan wadamo ay ka mid yihiin Shiinaha, UAE, Hong Kong iyo kuwo kale oo doonaya inay bartaan sida loo hadlo oo loo qoro Ingiriisiga.
Ma aha in qof walba u qalmo inuu iska qoro goobahaas. Waa inaad noqotaa macallin Ingiriis ah waana inaad hubisaa inaad si firfircoon u barato luqadda Ingiriisiga ka hor inta aan laguu oggolaan inaad is -diiwaangeliso.
Booqo goobaha VerbalPlanet or Macallimiinta Chegg inaad saxiixdo.
#25 Maqaallo iyo Qormooyin La Caddeeyay
Xaqiijinta waa hab kale oo lacag looga samayn karo onlayn oo bal qiyaas maxaa?
Habkani mar dhow ma baxayo. Ilaa iyo inta ay jiraan ereyo qoran, mar walba waxaa loo baahnaan doonaa tifaftireyaasha iyo tafatirayaasha.
Waxaa jira goobo badan oo aad ka heli karto dad raadinaya madax-bannaaniyaal si ay uga caawiyaan saxitaanka maqaaladooda. Qaar ka mid ah aaladaha kor lagu sheegay waxaa ka mid ah Fiverr, Upwork, craigslists, iyo wixii la mid ah.
#26 Calaamadaha Gaarka ah iyo Alaabada Iibinta ee Amazon
Maaha wax qarsoon in Amazon ay tahay dukaanka ugu weyn onlaynka oo leh in ka badan nus bilyan oo alaab ah oo la iibiyo bil kasta, taasoo ka dhigaysa fursad cajiib ah oo lacag lagu helo internetka.
Laakiin, sida wax kasta oo kale oo ku lug leh samaynta lacag onlayn ah, waa inaad xoogaa shaqo qabataa si aad u kasbato. Hal ikhtiyaar oo ku yaal Amazon ayaa ah in la helo badeecado horay loo sameeyay oo lagu iibsado oo lagu iibiyo qiimo dhimis. Dhaqankan ayaa hadda noqonaya mid isbadal ah waana hab fiican oo lacag fudud looga samayn karo si dhib la'aan internetka.
#27 Wadatashiga Safarka
Miyaad ku dhex jirtaa waxyaabo ku lug leh socdaalka? Waxaad ku bixin kartaa adeegyada la -talinta socdaalka onlaynka oo waxaad samayn kartaa lacag caddaan ah oo wanaagsan.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo arrintan loo maro. Waxaad dooran kartaa inaad abuurto degel ay socdaalayaashu booqdaan si ay kaagala tashadaan socdaalka ama waxaad dooran kartaa inaad ka shaqayso bogag baraha bulshada sida Facebook, Instagram, Twitter, ama LinkedIn.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa hubaal ah inaad lacag caddaan ah oo fudud ka samaysan karto internetka si aad u siiso tilmaamaha safarka.
#28 Isku qor TaskRabbit
Taskrabbit waa madal aad iska diiwaangeliso si aad ula kulanto dadka raadinaya caawimaadda hawlaha guriga iyo hawlaha guriga.
Marka, haddii aadan ka fikirin inaad u shaqeyso dadka si ay lacag u helaan markaa waa inaad runtii tixgelisaa is -qoritaanka www.taskrabbit.com.
Halkaas waxaad ka heli kartaa dad ku hareeraysan xaafaddaada oo u baahan in laga caawiyo walxaha sida socodkooda eeyaha iyo soo qaadista raashinka.
#29 Lacag u Samee Caafimaadkaaga
The Guulint app wuxuu ku siin lahaa caafimaad ahaan, inkasta oo mushaharku uusan badnayn Waxaad u baahan doontaa inaad fuliso hawlo fudud sida socodka iyo dabagalka cagahaaga iyo sidoo kale qaadashada sahaminta caafimaadka la xiriira.
#30 Iibso oo Iibso Domain
Dhaqanka iibsashada iyo iibinta xayndaabyada ayaa soo jiray in muddo ah hadda oo naso hubso in taasi si dhakhso ah u soconaynin.
Waa kan dhaqanku, dadku waxay iibsadaan xayndaabyada (tusaale ahaan magacyada mareegaha) waxayna ku hayaan rajada ah in mustaqbalka domain-yadu ay noqon doonaan kuwo si weyn loo raadiyo.
Si aad tan u samayso, waa inaad ka fikirtaa magacyada guud ee aan wali shirkaduhu adeegsan oo aad iibsato domain leh magacyada noocaas ah. Mustaqbalka marka shirkaduhu yimaadaan iyagoo weydiisanaya domain noocan oo kale ah, waxaad u taagan tahay inaad sameyso lacag aad u wanaagsan.
Tusaale ahaan, 2009, milkiilayaasha caymiska.com waxay iibiyeen domainka $ 16 milyan.
#31 Gelitaanka Xogta
Haddii aad leedahay faro degdeg ah oo aad ku xeel dheer tahay qorista, waxaad samayn kartaa lacag caddaan ah oo fudud onlayn adiga oo dejinaya heshiisyada gelitaanka xogta. Waxaa jira shirkado adiga ku raadinaya si ay uga caawiyaan inay xogta galaan.
Ka raadi fiverr iyo etsy heshiisyo suurtagal ah.
#32 Bilow Ganacsi onlayn ah
Haddii aad leedahay hami lahaanshaha meherad internetka ah, waxaan kaa codsanayaa inaad ka gudubto qorshaha. Waxaa jira dhowr meheradood oo onlayn ah.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa ka raadi online si aad wax ugu akhrido bilawga ganacsiyada la midka ah oo aad waddo si aad u samayso lacag caddaan ah.
#33 Iibinta Software
Dhismaha iyo iibinta softiweerku waa ganacsi faa iido u leh dadka xirfadda u leh berrinka. Waxaa jira softiweerro aad u badan oo aad dhisi karto si aad lacag uga samaysato softiweer macmiil oo muhiim ah ilaa ciyaaro aad ku ciyaari karto taleefankaaga si aad u nasato, dhisid iyo iibinta softiweerku waa dariiqa loo maro dadka ku xeel dheer xirfadda.
eCommerce ayaa si dhakhso ah u noqota amarka maalinta. Waxaad abuuri kartaa degel eCommerce oo aad ku iibiso alaabada jirka. In kastoo, waa inaan ka digaa inaad tartan adag ka geli doonto goobihii hore loo aasaasay sida amazon, Shopify iyo kuwo kale. Si kastaba ha noqotee, eCommerce waa hab loo maro.
#35 Iibi Qorshayaasha Macalimiinta Cusub
Saaxiibkii ayaa dhowaan aqbalay shaqo macallinnimo mid ka mid ah dugsiyada ku yaal xaafaddayda oo ilaa qaddar, ma joojin karin ka hadalka caqabadaha waxbaridda ee dugsi cusub.
Waxaan siiyay talo iyo qorshayaal aan ka aqaano dejinta deegaanno cusub saaxiibkaa ayaa si dhaqso leh ula qabsaday shaqadiisa macallinimo ee cusub.
Markaa waxaan is idhi ka warran haddaan fikradda isaga ka iibiyey. Dabcan, ma aan ka iibin karin qorshayaashiisa, waa saaxiib waana waxa ay saaxiibbadu sameeyaan - iyagoo is eegaya.
Laakiin waxaa jira macallimiin badan oo cusub oo halkaas u baahan qorshayaal ku saabsan sidii ay u degi lahaayeen deegaankooda cusub waxaadna ka iibin kartaa dadkaas qorshayaal tayo leh haddii aad leedahay waayo -aragnimada lagama maarmaanka ah.
#36 Iibi Khibradaada Ku Saabsan Hufnaanta.fm
Haddii aad xirfad u leedahay aag kasta oo ganacsi, markaa waxaad ka samayn kartaa lacag caddaan ah oo fudud khadka tooska ah kumanaan milkiileyaal ganacsi ah oo raadinaya siyaabo lagu hormarin karo ganacsigooda. Booqasho caddayn.fm si aad ula kulanto milkiilayaasha meheradda oo diyaar u ah inay ku bixiyaan khibraddaada.
#37 Ku shaqee Bogga Taageeraha Qof Caan ah
Fannaaniinta caanka ah, jilayaasha, iyo ganacsatada ayaa inta badan ku mashquulsan shaqada iyaga oo aan haysan waqti ay ku maareeyaan boggooda taageere.
Raggaani waxay leeyihiin kaaliyayaal meel kasta oo noloshooda ah sababtoo ah waqti la'aan weli boggooda taageerayaasha ee warbaahinta bulshada sida Facebook, Instagram, Twitter, iwm waa qayb muhiim u ah ganacsigooda.
Inaad nasiib u yeelato inaad hesho fursad aad ku ilaaliso bogga taageere ee qof caan ah waa hab fiican oo lagu sameeyo lacag caddaan ah oo fudud
#38 Lataliyaha shukaansiga onlaynka ah
Xidhiidhku waa qayb muhiim ah oo nolosheena ah waxaanan dadka ula xidhiidhnaa siyaabo kala duwan.
Xiriirka jaceyl waa hal shay oo aynaan ku dhowaad sameyn karin la'aantiis. Nasiib darro, dadka qaar bay ku adag tahay inay sii wadaan xiriirkooda dadka ay jecel yihiin.
Markaa, haddii aad ogaato inaad hibo u leedahay aaggan oo kale, markaa waxaad samayn kartaa dakhli wanaagsan adoo la tashanaya dadka u baahan caawimaad hagaajinta xiriirkooda.
#39 Noqo Qoraa
Ma tahay qoraa wanaagsan?
Waxaa jira fursado aan xad lahayn oo sugaya in la taabto haddii aad xirfad u leedahay qoraalka. Haddii aadan rabin inaad noqoto qoraa madax -bannaan, waxaad ka dalban kartaa mid ka mid ah wargeysyada ama joornaalada si aad maqaallo ugu qorto aaggaaga takhasuska leh.
#40 Tababaraha Jirdhiska Online
Miyaad ku ballaadhan tahay nidaamyada jimicsiga? Haddii aad wax badan booqato jimicsiga oo aad wax badan ka ogtahay jirdhiska, markaa waa inaad internetka gasho si aad ula kulanto dad diyaar u ah inay lacag ku siiyaan si aad ugu hagto arrimaha jirdhiska.
Siyaabaha kale ee lacag caddaan ah oo fudud looga sameeyo internetka waxaa ka mid ah;
41) Abuur Koorsooyin Online ah
42) Qor Falanqaynta Meelaha xiisaha leh ee aad booqatay
43) Hel Macaamiisha Iskood u Shaqaysta oo Iibi Adeegyadaada
44) Bilaw Online Business Dharka
45) Tafatir Fiidiyowyada Internetka
Ma jiro hab ka fiican oo lacag lagu sameeyo ama lacag caddaan ah oo sahlan oo online ah marka loo eego hababka aan kula wadaagay.
Waan ka faa'iiday hababka qaar waxaana rajaynayaa inaad adiguna noqon karto ka -faa'iideyste
10 siyaabood oo la xaqiijiyay oo ku saabsan Sida 300 oo dollar degdeg loogu helo
Sida Lacag Loogu Sameeyo Guriga Iyada Oo Aan Wax Maalgashi Ah Lahayn
20 Hustles Side Paying High ee Kanada hadda waad bilaabi kartaa
21 Siyaabood Oo Lacag Loogu Siinayo Si Aad Isku Sawirto Online & Offline
Fiiri Faallooyinka (29)
12 Shirkadaha Caymiska Nolosha Ugu Fiican 2022
Halkee Lagu Iibin Sariirta Lacag Badan 2022 | Tilmaan fudud
Lacag Nets lacag la'aan ah: $ 20 Markaad Hadda Is -qorto
Netspend waa shirkad fadhigeedu yahay Austin oo bixisa kaararka debit-ka ee horay loo sii isticmaali karo oo lagu iibsan karo dukaanka,…
Sida Lacag Loogu Sameeyo Sawir Qaade | 20 Siyaabood oo Fudud
Garoonka ay ku jiraan tartameyaal badan, maamulayaashu waxay fidiyeen baalashooda si ay kor ugu kacaan. Maxaan ahay…
Shaqooyinka ugu mushaarka badan 16-sano Shaqaalaynta hadda
Weligaa ma is weydiisay haddii ay kuu bannaan tahay 16 sano oo shaqo ah? Ama waalid ahaan,…
Sidee lagugu bixiyaa Poshmark 2022?
Waxaa imanaya waqti aad u baahan lahayd lacag sahlan… oo aad eegto dhammaan alaabta aad...
Qoritaanka eBooks-ka iyo iibinta kanaalada dhijitaalka ah waxaa laga yaabaa inaysan ahayn waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso…
Lacag Lagu Siinayo Daryeelka Ilmaha Naafada ah 2022 | Lacag Degdeg ah
Su'aalaha dhowrka ah ee maskaxdaada ku jira ee ku jira raadintaada inaad lacag badan samayso waxaa ka mid ah "Miyaan...